Sidee ismiidaamiyaha ugu suurtagashay in uu isku qarxiyo Saraakiisha? (Wax badan ka ogow) – AfmoNews
Ismiidaaminta ayaa ka dhacday afaafka hore Garoonka Kubadda Cagta ee Cabdullaahi Ciise, xilli loogu diyaargaroobayay in lagu soo dhaweeyo wafdiga Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gaaray magaaladaasi.
Afhayeenkii hore ee Maamulka Galmudug, Maxamed Xasan Sahal oo la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay in ninka is qarxiyay uu salaamay Korneyl Mukhtaar Cabdi Aadan, Taliyihii Kumaandooska Danab ee Qaybta 21aad ilbiriqsiyo ka hor, intii aanu is qarxin.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninkaasi ay is garanayeen Saraakiisha qaarkood, waana tan sahashay in si fudud uu ku soo dhex qaado, isla-markaana uu bartilmaameedsado Saraakiishaasi sar sare.
Saraakiisha ku dhimatay weerarkaasi ayaa waxaa laga xusi karaa Taliyihii Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi (Qooje), Taliyihii Kumaandooska Danab ee Qaybta 21aad, Korneyl Mukhtaar Cabdi Aadan, Taliye Kuxigeenkii Kumaandooska Danab, Marsha Mire, Sarkaal kale oo ka tirsanaa Qaybta 21aad, laguna magacaabi jiray Axmed Baaraaf, Duqii hore ee Magaalada Gaalkacyo, Maxamuud Yaasiin Tumey iyo dhawr askari oo kale.
Weerarkan ayaa damaashaadkii ka jiray Garoonka Cabdullaahi Ciise u bedelay mid jahwareer ah, iyadoona ay is dhex yaaceen boqolaalkii qof ee ku sugnaa garoonkaasi, sababo ku aadan iyagoo daryankii qaraxaasi ka argagaxay.